फेयर हाउसिंग - प्रेरी राज्य कानूनी सेवाहरू
हाम्रो फेयर हाउसिंग प्रोजेक्टले आवास प्रदायकहरूले भेदभावको मामिलाहरूको छानबिन गर्छ र चुनौती दिन्छ। यस परियोजनाले ग्राहकहरुलाई उचित आवास विवाद सुल्झाउन मद्दत पुर्‍याउँछ र निष्पक्ष आवास अधिकार र जिम्मेवारीहरुमा सामुदायिक कानूनी शिक्षा सञ्चालन गर्दछ।
फेयर हाउसिंग परियोजनालाई सम्पर्क गर्न:
एफ गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्हामीलाई सामाजिक मिडिया मा ollow!
स्रोत र आउटरिच
अंग्रेजीमा हाम्रो फेयर हाउसिंग परियोजना ब्रोशर हेर्नुहोस्
हाम्रो फेयर हाउसिंग परियोजना ब्रोन्सर स्पेनिशमा हेर्नुहोस्
PSLS यौन उत्पीडन आवास
वित्तीय साक्षरता_प्रेम खरीद
वित्तीय साक्षरता_प्रेम खरीद (स्पेनिश)
वित्तीय साक्षरता_पोस्ट खरीद
वित्तीय साक्षरता_पोस्ट खरीद (स्पेनिश)
वित्तीय साक्षरता_ फोरेक्लोजर प्रक्रिया
वित्तीय साक्षरता_ फोरेक्लोजर प्रक्रिया (स्पेनिश)
प्रेरी स्टेट कानूनी सेवाहरूले उचित आवास कानूनहरूको चेतना जगाउने काम गर्दछ जसले व्यक्तिहरूलाई आवास भेदभावको बिरूद्ध संरक्षण गर्दछ।
हामी विकास र वितरण शैक्षिक सामग्री यसले आवास अन्याय रोक्नको तरिकाहरू र भेदभावको बिरूद्ध संरक्षण गर्ने लागू कानूनहरू वर्णन गर्दछ। हाम्रो सामग्री दुबै अंग्रेजी र स्पेनिशमा उपलब्ध छन्।
हामी प्रस्तुत गर्दछौं निष्पक्ष आवास कार्यशालाहरू जग्गा मालिकहरू, भाडावालहरू, नाफारहित संस्था र सरकारी कर्मचारीहरूको लागि। हामी ट्रेनिंगहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं जुन निष्पक्ष आवास कानून भित्र विशेष शीर्षकहरूमा केन्द्रित हुन्छ।
यदि तपाइँ वा तपाइँको संगठन अधिक जान्न चाहानुहुन्छ, कृपया फेयर हाउसिंग प्रोजेक्टमा आज सम्पर्क गर्नुहोस् [ईमेल सुरक्षित].
फेयर हाउसिंग के हो?
निष्पक्ष आवास विभेद मुक्त घर छनौट गर्ने व्यक्तिको अधिकार हो। आवास बजार मा, "भेदभाव" को अर्थ एक अभ्यास हो कि कसैको विशेष लक्षण को कारण आवास छनौट लाई सीमित गर्दछ। केवल केहि विशेषताहरु कानून अन्तर्गत सुरक्षित छन्। संघीय कानून अन्तर्गत ती विशेषताहरु जाति, रंग, धर्म, लि gender्ग, राष्ट्रिय मूल, पारिवारिक स्थिति (बच्चाहरु संग परिवार), र अशक्तता हुन्। इलिनोइस मा, कानून संघीय कानून प्लस वंश, उमेर, सैन्य वा सैन्य छुट्टी स्थिति, वैवाहिक स्थिति, सुरक्षात्मक आदेश स्थिति, गर्भावस्था स्थिति, गिरफ्तारी रेकर्ड र यौन अभिविन्यास को रूप मा उस्तै लक्षणहरु लाई सुरक्षा गर्दछ।
उचित आवासको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, भ्रमण गर्नुहोस्:
अमेरिकी आवास र शहरी विकास विभाग (HUD) मा निष्पक्ष आवास र समान अवसरको कार्यालय।
मानव अधिकार को इलिनोइस विभाग मा निष्पक्ष आवास प्रभाग
कसले उचित आवास प्रदान गर्नु पर्छ?
सीमित अपवादहरूको साथ, सबै आवास प्रदायकहरूले कानून द्वारा उचित आवास प्रदान गर्नुपर्नेछ। आवास प्रदायकहरूले समावेश गर्दछ:
भवन मालिक / जग्गा मालिकहरू
रियल एस्टेट एजेन्टहरू
धितो ब्रोकर र कम्पनीहरू
बैंक वा अन्य ndingण दिने संस्था
अवैध आवास भेदभाव कस्तो देखिन्छ?
अवैध आवास भेदभाव धेरै प्रकारका लिन सक्दछ। केहि सामान्य फारमहरु समावेश:
वक्तव्यहरू सुझाव दिन्छ कि उपलब्ध आवास उपलब्ध छैन
भाँडामा वा बिक्री गर्न वा आवासको लागि सम्झौता गर्न अस्वीकार
उचित आवास बनाउन वा अक्षमता व्यक्तिको लागि उचित संशोधनलाई अनुमति दिन अस्वीकार
धितो loansणको बारेमा जानकारी बनाउन वा प्रदान गर्न अस्वीकार
भेदभावपूर्ण नियम र सर्तहरू
धम्की, धम्की, जबरजस्ती वा बदला
हाउजि services सेवाहरू जुन अरूलाई उपलब्ध छन् भन्दा फरक छन्
यदि तपाईं आवास भेदभावको शिकार हुनुहुन्छ भने, प्रेरी राज्य कानूनी सेवाहरूले:
घर मालिक वा अन्य आवास प्रदायकसँग तपाईंको तर्फबाट वार्ता गर्नुहोस्।
अनुसन्धान गर्नुहोस् कि तपाइँलाई लागी उचित आवास परीक्षणको प्रयोगको माध्यमबाट आवास भेदभाव हुन सक्छ।
तपाईंलाई आवास तथा शहरी विकास विभाग वा इलिनोइस मानव अधिकार विभाग वा अदालतमा गुनासो फाइल गर्न मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईंले गुनासो पेश गर्नुभयो भने अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्नुहोस्।
मेला आवास परियोजनाले कसले सेवा गर्छ?
परियोजना लेक, McHenry, Boone, Winnebago, Peoria र Tazewell काउन्टीहरुमा सेवा गर्न को लागी विशेष कोष प्राप्त गर्दछ; Bloomington को शहर र सामान्य को शहर।
यहाँ केहि उदाहरणहरू छन् जुन अवैध आवास भेदभाव जस्तो देखिन्छ:
"हामी केवल अ English्ग्रेजी स्पिकरहरूलाई भाँडा दिन्छौं।"
"होईन, हामी तपाईलाई आफ्नो व्हीलचेयरको लागि र्याम्प बनाउन अनुमति दिन सक्दैनौं।"
"म महिलालाई भाँडा दिन रुचाउँछु।"
"हामी समर्थन जनावरहरूलाई अनुमति दिदैनौं, जबसम्म यो प्रमाणित हेर्ने कुकुर हो।"
"हामी शहरको त्यो भागमा धितो loansण प्रस्ताव गर्दैनौं।"
"अपार्टमेन्ट भाँडामा लिइसकिएको छ (र थप अनुसन्धानले देखाए कि यो वास्तवमा भाडामा थिएन)।"
"म तपाईंलाई माथिल्लो तलामा अपार्टमेन्ट भाँडामा लिन सक्दिन किनभने तपाईंको केटाकेटीहरू अरू भाडावालहरूको लागि अलि श .्गको हुनेछ।
"म तपाईंलाई भाँडा लिन सक्दिन किनकि तपाईसँग सुरक्षा आदेश छ र म यहाँ कुनै समस्या चाहन्न।"
"सुरक्षा निक्षेप दुई महिना भाडा हो।" (र थप अनुसन्धानले अरूले सानो जम्मा गरेको भुक्तान गर्दछ)
"हामी ती प्रतिस्पर्धी ब्याज दरहरू विवाहित जोडीहरूलाई मात्र प्रस्ताव गर्दछौं।"
"यहाँ तपाइँको खारेज सूचना छ।" (तपाईं एक आवास प्रदायकको कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीडन गुनासो पछि)
भोलन्ट परीक्षक बन्नुहोस्
हाम्रा केही स्वयंसेवकहरू "परीक्षकहरू" हुन्। हामी परीक्षकहरूलाई "टेस्ट" भन्ने असाइनमेन्टमा जानका लागि प्रशिक्षण दिन्छौं। यी परीक्षणहरूको बखत, हाम्रा स्वयम्सेवकहरूले अपार्टमेन्ट, घर, वा गृह loanण खोज्ने व्यक्तिको भूमिका खेल्छन्। परीक्षकहरूले अपार्टमेन्ट शो, खुला घरहरू, वा अन्य अनुभवहरूमा भाग लिन सक्दछन् हामीलाई उचित आवास अभ्यासहरूको अनुगमन गर्न मद्दत गर्न। यस तरिकाले, हामी तुलना गर्न सक्दछौं कि कसरी एक विशेष आवास प्रदायकले विभिन्न गुणहरू भएका मानिसहरूलाई व्यवहार गर्दछ। उदाहरण: हामी तुलना गर्न सक्दछौं कसरी एउटा प्रदायकले सेतो परीक्षकलाई अफ्रिकी-अमेरिकी वा हिस्पैनिक परीक्षकको तुलनामा व्यवहार गर्दछ। वा, हामी तुलना गर्न सक्दछौं कसरी प्रदायकले कुनै अशक्तता भएका परीक्षकको तुलनामा अशक्तता भएका मानिसलाई व्यवहार गर्दछ। हामी तुलना गर्न सक्दछौं कि कसरी प्रदायकले बच्चासँग अभिभावकलाई व्यवहार गर्दछन् एकल परीक्षकको तुलनामा। फेयर हाउसिंग प्रोजेक्टको वकालत कार्यक्रमहरूका लागि परीक्षकहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। स्वयम्सेवक परीक्षकहरूको विविध पोखरी बिना, अवैध भेदभावको दावी अनुसन्धान गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ।
किन परीक्षण गर्दै?
अदालतहरूले लगातार अवैध रूपमा आवास भेदभावको अभ्यासहरू पहिचान गर्न वैध र आवश्यक विधिको रूपमा परीक्षण प्रक्रियालाई समर्थन गरेको छ। कहिलेकाँही परीक्षण एक मात्र विधि हो जसद्वारा संगठनहरूले सूक्ष्म भेदभावको पर्दाफास गर्न सक्दछन्।
म कसरी परीक्षक बन्न सक्छु?
यदि तपाइँ परीक्षकको चुनौतीपूर्ण र पुरस्कृत भूमिका लिन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले एउटा आवेदन पूरा गर्नुपर्नेछ। एकचोटि आवेदन प्राप्त भयो र पूर्वावलोकन भएपछि, तपाईं हाम्रो व्यापक परीक्षक प्रशिक्षण सत्रहरू मध्ये एउटामा दर्ता हुनुहुनेछ।
विविधता: हामीलाई सबै जाति, जातीय पहिचान र उमेरका पुरुष र महिलाहरू चाहिन्छ।
विश्वसनीयता: एकचोटि तपाईंले असाइनमेन्टमा प्रतिबद्ध गर्नुभयो भने, हामीलाई तपाईंको शीघ्र कार्य र फलो-थ्रु आवश्यक छ। हामी तपाईंको तालिकाको साथ काम गर्दछौं।
उद्देश्य: हामीलाई स्वयंसेवकहरूको आवश्यक छ जसले घटनाहरू अवलोकन गर्न र सम्झन सक्दछन्। परीक्षकहरूले भेदभाव "फेला पार्न" कोशिस गर्दैन तर परीक्षाको बखत के भयो निष्पक्ष रूपमा रिपोर्ट गर्दछ।
विश्वसनीयता: परीक्षकहरूले विशेष परीक्षणको लागि गवाहीको रूपमा गवाही दिन आवश्यक पर्दछ। यस कारणले गर्दा, परीक्षकहरूसँग पहिलेको दुर्व्यवहार वा धोखाधडी वा झूटा आरोपहरुमा संलग्न अपराधहरुमा विश्वास हुनु हुँदैन।
प्रशिक्षण: हामी एक प्रशिक्षण सत्र प्रदान गर्दछौं र सबै स्वयंसेवकहरूले उनीहरूले कार्यहरू प्राप्त गर्नु अघि उनीहरूलाई अभ्यास परीक्षण दिन्छन्। हामी ती स्वयम्सेवकहरूका लागि एक सानो वजीद प्रदान गर्दछौं जसले सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण गर्दछन्।
प्राविधिक सीप: हामी स्वयंसेवकहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौं जसले माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रयोग गर्न सक्नेछन् उनीहरूको अनुभवहरू कागजात गर्नको लागि। हामी अशक्त मानिसहरूलाई अपवाद बनाउन खुशी छौं।
यातायात: हामी स्वयंसेवकहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौं जसले आफ्नै यातायातको व्यवस्था गर्न वा व्यवस्था गर्न सक्दछन्। हामी परीक्षकहरूलाई उनीहरूको माइलेज वा यातायात लागतहरूको लागि फिर्ता दिन्छौं।
पहिचान: सबै परीक्षकहरूको राज्य-द्वारा जारी पहिचान हुनुपर्दछ।
कार्य प्राधिकरण: सबै परीक्षकहरुलाई संयुक्त राज्य अमेरिका मा काम गर्न आधिकारिक हुनुपर्दछ।
भुक्तानी: हामी परीक्षाहरूको कामलाई साना बिषयवस्तुहरूको माध्यमबाट क्षतिपूर्ति दिन्छौं।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि परीक्षण अंशकालिक रोजगार होईन र स्थिर काम होईन। हामी परीक्षकहरूलाई आवश्यक्ता गर्दछौं जब हामीलाई आवश्यक छ र तिनीहरू उपलब्ध छन्। रियल ईस्टेट एजेन्टहरू र आवासीय सम्पत्ति भाडामा लिन वा बिक्रीमा संलग्न व्यक्ति परीक्षकको रूपमा सेवा लिन योग्य हुँदैनन्।
आफ्नो आपराधिक रेकर्ड खाली! बिहीबार, जुन 30, 12:00-2:00 PM सम्म फ्रीपोर्ट पब्लिक लाइब्रेरी, 100 E. Douglas St., Freeport, IL मा नि:शुल्क एक वकीलसँग भेट्नुहोस्। अझै सिक: bit.ly/3lyAjqm	... थप हेर्नुहोस्हेर्नुहोस् कम
आफ्नो आपराधिक रेकर्ड खाली गर्नुहोस्, जुन 30 र जुलाई 28 - प्रेरी राज्य कानुनी सेवाहरू
आफ्नो आपराधिक रेकर्ड खाली गर्नुहोस्। बिहीबार, जुन 30 र जुलाई 28 मा 12:00-2:00 PM सम्म, फ्रीपोर्ट पब्लिक लाइब्रेरी, 100 E. Douglas St., Freeport, IL मा नि:शुल्क एक वकीलसँग भेट्नुहोस्।